Iinkwenkwezi ezintsha zeemarike ezikhulayo | Ezezimali
Iimarike ezikhulayo ngala mazwe okanye ezoqoqosho ezikwisigaba sotshintsho phakathi kwamazwe asakhasayo ngophuhliso nophuhliso. Banomdla wokuqwalaselwa kuba banokumela ithuba leshishini kwiimarike ze-equity. Ayothusi into yokuba ukuphinda iphinde ibe nakho ukuphakama kunokuba nkulu kwaye nangayiphi na imeko ibe ngaphezulu kweemarike zemveli. Nangona kunjalo, lumka kakhulu kuba imisebenzi yakho inomngcipheko omkhulu kakhulu. Apho unokufumana imali eninzi kodwa ushiye ii-euro ezininzi apha endleleni.
Kude kube ngoku besisetyenziselwa iimarike ezisakhulayo ezimelwe koko kubizwa ngokuba yi-BRICS. Ngokufanelekileyo, IBrazil, iRussia, i-India, i-China kunye noMzantsi Afrika. Kodwa kwiinyanga nje ezidlulileyo, kuye kwavela ezinye iindlela zentengiso. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi eziza kuthengiswa kwimarike yemasheya kwezinye zazo? Ewe, asizukubhekisa kwezo zinokuthi zenziwe njengethuba leshishini kwabona batyali mali abancinci nabaphakathi.
Kule meko ngokubanzi, IBulgaria, i-Indonesia, iVietnam, iPeru neMexico phakathi kweemarike ezisakhasayo, bayasindiswa kukungaqiniseki kwehlabathi okubangela isoyikiso kuhlumo loqoqosho kwinxalenye enkulu yezoqoqosho lwamazwe aphesheya, itsho isuka eCrédito y Caución. Ukuqonda ukuba bahlala benethemba lokukhula kunye nokuba semngciphekweni kumngcipheko wehlabathi esijamelene nawo ngoku. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba inokuba yenye yeendlela zokutyala imali kwiimarike zezabelo zamazwe alapha ngentla.
1 Ukuvela: iindawo zentengiso
2 Amazwe kunye namacandelo emveliso
3 Usebenza njani kwezi marike?
4 Iimarike ezinokuguquguquka kakhulu
Ukuvela: iindawo zentengiso
Iimarike ezihlumayo zibonakaliswa yinto yokuba uqoqosho lwazo luguquka ngendlela ezinzileyo, neemeko ezifanelekileyo zentengiso kwimidla yabo ngokubanzi, isimilo sokuziphatha esiqinileyo kwaye ngaphezulu kwako konke ukukhula kunye namathuba oshishino kumacandelo ngamacandelo okuveliswa kwezoqoqosho lwabo.
Akumangalisi ke ngoko, ukuba amanye ala mazwe angaqhuba ngcono kunakwilizwe ekuthiwa linamashishini. Ngaphandle komngcipheko obuthathaka obandakanyekayo nakuphi na ukuvulwa kwezikhundla kwiimarike zemali.
Amazwe kunye namacandelo emveliso
Indoneshiya ibonelela ngamathuba oshishino kumacandelo oqoqosho ahlukeneyo. Phakathi kwazo, iikhemikhali, iimveliso zamayeza, izinto zokuthambisa, ukutya, impahla kunye nezihlangu, ukubuk 'iindwendwe nolwakhiwo, phakathi kwezinye zezona zibalulekileyo. Ngelixa ngokuchaseneyo, enye evelayo njengeBulgaria okwangoku ikumacandelo okubaluleka kwempahla yabathengi, ifashoni kunye nokuzonwabisa ngokubanzi. Ezinokungeniswa kwipotfoliyo elandelayo yotyalo-mali ngenjongo yokwenza ukuba inkunzi ifumaneke kwistokhwe esinenzuzo.
Kwelinye icala, iVietnam ikwakhona, ebonelela ngeenkonzo zonxibelelwano, uyilo, ukhenketho, iifranchise, iimveliso zezemali kunye nobunjineli ngokubanzi. Ngelixa kumazwe aseMelika, oko kukuthi, iPeru neMexico zisekela isicwangciso-qhinga sokwakha kunye namandla ahlaziyekayo. Njengoko ubona, sisibonelelo sotyalo-mali esahlukileyo ngokufanelekileyo ukuze ukhethe icandelo lezorhwebo elifanela iprofayili yakho njengomtyali mali omncinci nophakathi. Kuluhlu olubanzi lwezindululo zentengiso yesitokhwe kunye nakho konke ukuthanda, kwaye njengoko ubona ngoku.
Usebenza njani kwezi marike?
Isilumkiso kufuneka ibeyinto eqhelekileyo kwizenzo zabatyali mali abancinci nabaphakathi kule ndawo yotyalo mali. Ngokukodwa, kuba ziimarike ezikhethekileyo ezifuna unyango olwahlukileyo kunolo lulandelwe kwiindawo eziqhelekileyo. Apho ungalandela khona ezi zikhokelo zilandelayo zesenzo esizityhila apha ngezantsi kweli nqaku.
Yenza imisebenzi kakhulu imali encinci, ngenxa yokuba bayasebenza kwiimarike ze-equity ngokuvezwa okukhulu komngcipheko.
Zonke iiodolo zokuthenga kufuneka zibandakanye igunya lokunciphisa umda welahleko okanye ezaziwa njenge yeka ii-odolo zelahleko. Ngenjongo yokucinga kuphela ngelahleko ezinokuthwalwa ngabasebenzisi ngalo naliphi na ixesha.
Cwangcisa a iqhinga lotyalo mali ukuze ngale ndlela sicace gca ukuba yeyiphi eyona nto sifuna ukuyenza. Apho kubandakanywa ixesha lokusisigxina la msebenzi, oko kukuthi, ukuba yenzelwe ixesha elifutshane, eliphakathi okanye elide.
Yazi ubuncinci malunga nemarike yezemali apho siza kutyala imali ekhoyo kwimarike yemasheya. Oku kuya kusinceda thintela enye ingxaki kwiintshukumo ezivulekileyo kwiimarike zezabelo.
Ukuba unokukhetha amaxabiso awaziwa kancinci kwaye Sazise imigca yeshishini elinikezelwe kuyo. Enye yeempazamo ezinkulu kwezi meko kukuthenga ukuthenga kwaye esi sicwangciso ekulungiseleleni ipotifoliyo yamaxabiso anokukhokelela ekubeni sithathe isigqibo esingalunganga kwaphela.
Iimarike ezinokuguquguquka kakhulu
Ukuba ezi ntengiso zamanye amazwe zibonakaliswa yinto ethile, kungenxa yokungazinzi okugqithisileyo apho amaxabiso esitokhwe adweliswe khona. Ngokwahluka okunamandla phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi, ngamanqanaba okuphambuka mihla le anokukhokelela kwinqanaba le-5% okanye ngakumbi nangakumbi kwezinye iimeko. Ngelixa kwelinye icala, amaxabiso ahlala ethambekele ekophulweni kwenkxaso kunye nokuchasana ngesantya esithile kwaye esenza ukuba kube nzima kakhulu ukulandela iitshathi kuhlalutyo lobuchwephesha.
Onke amanyathelo okhuseleko abambalwa ukukhusela imali kutyalo-mali lwethu kwezi marike zikhethekileyo zezemali. Asinakho ukulibala ukuba kunzima ngakumbi ukulandela kuneemarike zemveli kwaye oku kwahluka kufuneka kuthathelwe ingqalelo xa kulungiswa ipotfoliyo yethu elandelayo yotyalo-mali. Ngaphandle kwezinye izinto eziqwalaselweyo zobuchwephesha bobuchwephesha okanye ukusuka kwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ungakulibali ukuba awufuni ukusukela ngoku ukuya kwesinye isimanga esibi esinokuchaphazela ibhalansi yeakhawunti yakho yokonga kule minyaka imbalwa izayo. Kungcono ukuthintelwa kunokuba uphulukane nenxalenye elungileyo yekomkhulu lakho okanye losapho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Iinkwenkwezi ezintsha zeemarike ezikhulayo
Iingcebiso zokuNciphisa umngcipheko kurhwebo lwe-Forex